Somaliland.Org » Aragtidayda Muranka Miisaanka Maansada Somaliland.Org
OPINIONAragtidayda Muranka Miisaanka Maansada
May 29th, 2008 Comments Off Ibraahin Yuusuf Axmed “Hawd” Dhaqan ahaan sheegashada halabuurka iskuma aynu qabsan jirin, maansada oo ahayd waxa ugu badan ee la curiyana weligeed taariikhda soomaalida anigu kuma aan maqal laba qof oo lahaanteeda isku qabsaday. Halabuurkuna, sidiisaba, qofka uma lahaan jirin waxtar ka badan haybad iyo qurux uu ku xarragoodo, ninka kale ee xarragadaa ku qabsadaana wuxuu noqon lahaa bahal liita oo aan isagu xarrago samaysan karin. Xitaa dhaqanka cusub iyo nolosha magaalada ee ay fanka, suugaanta iyo weliba qoraalku lacagoobeen anigu weli ma maqal laba qof oo xuquuqda curinta ku murmaya. Taa waxaa caawiyey hiddaha oo sidaas ahaa. Waa ta sababtay xilligii dawladnimada in aan laguba baraarugin dejinta xeerar ilaaliya xuquuqda iyo lahaanshaha halabuurka.
Dhaqanka sidaas u hufan ee aynu caadaysannay haddii aynu wax burinaya maqallo waxaa inagu dhacaya xanaaq iyo weliba cabsi. Laakiin haddana khasab ma aha isku qabsiga mar walba in ay godobi ku jirto; waxaa jiri kara qalad dhacay iyo ismoodsiis ay labada dhinacba ka eed la yihiin. Sidaas darteed marka dhiillo caynkan ah la maqlo waxaa wacan in dhinaca samaha eegmada lagu horraysiiyo ilaa ay si kale caddaato, taas ayaana habboon in lagula dhaqmo khilaafka Cabdillaahi Diiriye Guuleed “Carraale” iyo Maxamed Xaashi Dhamac “Gaarriye” ee ku saabsan kooda daahfuray xeerka miisaanka maansada soomaalida. Waa doodad ay mareegta Wardheernews.com ku dardargelisay waraysiga ay dhowaan la yeelatay Carraale: http://www.wardheernews.com/Wareysiyo/05_wareysi_Diiriye.html.
Malahase waxaa habboon horta in aynu isla eego miisaankan maansada ee laga hadlayaa waxa uu yahay iyo waxtarka ku jira ogaanshihiisa ama barashadiisa. Macallin Carraale isaga oo soo koobaya waxa uu miisaankaasi yahay wuxuu ku sheegay:
1. Tiro cayiman oo meerisyada bah maanso ku dhismaan una gaar ah. Ka soo qaad Jiiftada oo meeriska u salka ahi ka kooban yahay shan dhawaaq oo afar shaqal dheere lee yihiin.
2. In bah maanso oo kasta laga rabo in kaalimo cayiman shaqal dheeruhu ka galo ama ka galaan haddii ay mid ka badan yihiin.
3. In la dhawro hormaynta bah maanso lee dahay, waayo way ku kala duwan yihiin bahuhu xagga hormaynta. Meerisyada haddii hormaynta wax laga beddello waxa ay isu rogi karaan bah maanso oo kale.
Weydiintuse waxay tahay, miisaankaas in la barto waxtarka ku jiraa waa maxay? Haddii aan la baranse, illayn awelba iyada oo aan la aqoon ayaa la maansoon jiraye, maxaa lagu waayayaa? Warcelinta waa lagu kala duwan yahay. Abwaan Gaarriye wuxuu rumaysan yahay waxtarka meesha ku jiraa in uu yahay iyada oo qofkii miisaankaa bartaaba maansayahan noqon karo! Maqaalkiisii berigaa waa kii ku bilaabay:
Maqal. Ma jeclaan lahayd inaad gabaydo? Mase og tahay inaan abwaannimada loo dhalan uun ee la samayn karo? […] Aniga ayaa kuugu macallin noqonaya sida loo gabyo ama loo heeso.”
Laakiin taasi run ma tahay? Aniga jawaabtaydu waa maya. Haa, maanso-curinta waa la baran karaa, waase arrin u baahan isku taxallujin iyo ku tababbarasho dhismaha iyo habdhaca meeriska maansada, ilaa qofka dareenkiisu dhadhansado lana qabsado. Marka ay taasi dareenka qofka la falgasho ayuu u gudbi karaa heer kale oo ah in uu dhab isu cabbiro oo aragtida iyo dareenka si habaysan maanso ugu soo gudbiyo isaga oo aan miisanka ku hawshoon. Taasna guusheeda dadku aad ayey ugu kala duwan yihiin iyada oo ku xidhan qof waliba duruufaha afeed, degaan iyo dadeed ee uu ku dhex koray ama ku dhex nool yahay. Taas waxaa ka baxsan hibada dhalanka ah ee ay dad gaar ahi lee yihiin kagana duwan yihiin cid walba oo kale oo iyaga duruufahaas oo dhan la wadaagta. Hibadaas dhalanka ahi waa ta kala duwi karta mataano weligood isku meel ku noolaa maansadana isku si u jeclaa oo haddana midkood noqon karo abwaan ka kalena amuume.
Shaqayn mayso, weligeedna shaqayn mayso, aragtida Abwaan Gaarriye ee odhanaysa